शिल्पा पोखरेलका बिषयमा समाचार बनाएपछि प्रकाश सुवेदी माथि यसरी खनिइन् नायिका करिस्मा मानन्धर
काठमाडौ.- नायिका शिल्पा पोखरेल भोजपुरी नायकसँग लागेको भन्दै कार्यक्रम बनाएका आफूलाई चलचित्र पत्रकार बताउने प्रकाश सुवेदीले उक्त काम कसको निर्देशनमा गरेका थिए भन्ने प्रश्न अहिले चौतर्फी रुपमा उठेको छ । आफूलाई मन नपरेका र आफूले
एउटा गरिब परिवारमा जन्मिएकी रोदा राई जसको आवाजमा छुट्टै किसिमको जादु सुनिन्छ । पहाडको एकलास अनि खोलाको नजिकैमा उनको घर रहेको छ । घरको आर्थिक अवस्था एकदमै नाजुक रहेको परिवारमा बिचरा कलिलै उमेरमा सम्पुर्ण जिम्मेवारी
काउली बुढीको देउडा गायकसंग दोहोरीमा अहिले सम्मकै कडा भीडन्त
काठमाडौँ- कुनै कुनै नाम यसरि भाइरल हुन्छन कि उनीहरुलाई चिन्दिन भनेर भनेपनि पत्ताउनै गार्हो हुन्छ । दर्शकहरुले सुनेको नाम र पछिल्लो समय धेरै रुचाएको नाम हो काउली बुढी उर्फ सन्ध्या बुढा । सुर्खेतमा जन्मिएकी सन्ध्या
सारा नेपालीको आँखा रसाउने निर्मला पन्त र भागीरथी भट्ट लगायतका चेलीहरुमा समर्पित दर्दनाक पिडा समेटिएको गीत सार्वजनिक
काठमाडौ । ब ला त्कार र ह त्याका घटनाहरु नेपालमा दिन प्रतिदिन बढदै गईरहेको र बालिका समेतलाई पापीहरुले दया नगरेको पछिल्लो समयका धेरै घटनाहरु भएका छन । जस्तै निर्मला पन्त, भागिरथी भट्ट लगायत यस्ता निर्दोष
धरान- धरानको वरगाछीदेखि करिब डेढ किलोमिटर पूर्वतर्फ एउटा सानो वस्ती छ । वस्ती छेउमै सानो खोला छ । सोही खोलामा एक २० वर्षिया सुन्दरी ढुंगा खोजिरहेकी छिन् । रोदा राई नाम गरेको ती सुन्दरीले रहरले
काठमाडौँ । युवा पुस्ताका चर्चित गायक किरण भुजेल र गायिका अस्मिता अधिकारीको युगल गायनमा समावेश गीत 'मन खाने माया'को म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ। प्रेमिल शैलीको यस गीतलाई बेलायतवासी गीतकार दिप गिरीले लेखेका हुन्। गीतमा
काठमाडौं- पछिल्लो समयमा चर्चामा रहेका गायक विवेक चौलागाई र गायीका रचना रीमालको स्वरमा रहेको गीत ‘बैना’ सार्वजनिक भएको छ । गतिको शब्द/संगीत प्रभावन जे, मिक्सीङ/मास्टरिङ गोविन्द सोनी, र स्टुडियो एक्सन स्टुडियोमा रेकर्डिङ गरिएको हो । सत्यकला
मन पराएँ तिमीलाई’ मा सरोज र रजनी बाबुछोरी
काठमाडौं-अमेरिका निवासी गीतकार ज्ञानेश्वर तिवारीको शब्द,डेबिड शंकरको स्वर र दीपक शर्माको संगीतमा रहेको ‘मन पराएँ तिमीलाई’ बोलको गीतको भिडियो सार्वजनीक गरिएको छ । राजु अघिकारी निर्देशीत भिडियोमा सरोज खनाल,रजनी केसी र सरोज दाहालको अभिनय छ। ओएसआर
भिडियोमा हेर्नुहोस पोखरामा बन्दै गरेको आकाशे पूल
पोखरा- पोखरा महानगरले पोखराको सिर्जनाचोकमा आकाशे पुल निर्माण गर्दैछ । करिब साढे २ करोड लागतमा आकाशे पुल बनाउन लागिएको हो । पुलको डिजाईन र स्टिमेट समेत तयार भैसकेको छ । २ करोड ४१ लाख रुपैयाँमा
भाइरल हुनकै लागि डोजर चलाएकी हुन् त् करुणाले ? हेर्नुस बास्तबिकता यस्तो रातारात आयो यस्तो प्रस्ताब, प्रमोद खरेलको गीतमा अभिनय गर्दै
काठमाडौं । भिरपाखा मा डोजर चलाउने साहसी महिला करुणा अहिले मिडियामा आएकी थिइन्। हेर्दा उनि जति सुन्दर देखिन्छिन त्यो भन्दा धेरै उनको उनको दुख छ। धेरै पैसा कामाई आफ्नो बुबा आमा लाई सुख दिन्छु भनेर
एकल जीबन बिताइरहेकी ९० बर्षकी भद्र कुमारीको जोश जागर देखरे छक्क नर्पनीको होला ? हेर्नुहोस भिडियो
काठमाडौं- भद्र कुमारी घले नामनै काफी छ नेपालीको लागि । व्यति एक काम अनेक , ९० बर्षको उमेरको जोश जागर देख्नु भएमा पर्नु हुन्छ चकित । कहिल्यै बिहेको सोच नआएको बताउने भद्र कुमारी घले अहिले पनि